Fihoaram-pefin’ny mpitandro filaminana :: Miaramila 27 naiditra am-ponja noho ny famonoana telo lahy tao anaty fiara • AoRaha
Fihoaram-pefin’ny mpitandro filaminana Miaramila 27 naiditra am-ponja noho ny famonoana telo lahy tao anaty fiara
Fantatra ny marina momba an’ireo lehilahy telo hita faty tao anaty rano teny Ampitatafika Antanifotsy tamin’iny lalam-pirenena
fahafito iny, tapa-bolana lasa izay. Voalaza fa novonoina, voadaroka sy nokendaina tao anaty fiara izy telo ireo. Voarohirohy tamin’izany ny miaramila miisa valo amby roapolo. Voatazona am-ponja vonjimaika eny Tsiafahy ny fito amby roapolo. Mbola hatao famotorana kosa ny iray farany noho izy mbola any am-pamitana iraka. Naharitra adim-pamantaranandro maro ny fihainoana azy ireo nanoloana ny Fampanoavana, tamin’ny zoma hariva lasa teo. Efa tamin’ny 1 ora maraina, ny sabotsy, vao vita ny fanolorana ny raharaha tamin’ny Fitsarana.
Miaramilan’ny RFI eny Ivato ny enina amby roapolo lahy amin’ireto voarohirohy ireto. Avy etsy amin’ny Capsat etsy Soanierana kosa ny roa. Fantatra fa mitondra ny grady serza ny dimy amin’ izy ireo, lietnà ny roa ary miaramila tsotra ny roapolo ambiny. Ny zandarin’Ambohimandroso no nandray ny fanadihadiana rehetra, taorian’ny fahitana ny razana telo samy nifatotra tongotra aman-tanana tao anaty rano teny amin’ny lalam-pirenena fahafito, ny marainan’ny zoma 31 mey.
Voatondro ho dahalo
Fantatra fa nisy namono ireto hita faty. Tamin’ny fihenoana ny fianakaviany no nahafantarana fa nosamborin’ ny miaramila tany Ambohi- mahasoa izy telolahy ireo.
«Nanao hetsika fampandrian-tany tany Ambohimahasoa ireo miaramila ireo. Nisambotra lehilahy telo voatondro fa dahalo izy ireo, tamin’izany. Tsy natolotra ny zandary na ny polisy tany an-toerana anefa ireo voasambotra. Vita ny iraka ka nody tany amin’ny tobiny ireo miaramila ireo. Nampijaliana tao anaty fiara ary nariana tany anaty rano ireo lehilahy voasambotra. Nisy tamin’ireo miaramila ireo no nandray anjara mivantana tamin’ny famonoana. Nisy kosa no voatondro ho mpiray tsikombakomba», hoy
ny zandary nanao ny fanadihadiana.
Ny zoma lasa teo tokony ho tamin’ny fito ora alina no nanomboka noraisin’ny mpitsara mpanao famotorana teny amin’ny Fampanoavana tetsy Anosy ireo mpitandro ny filaminana voarohirohy tamin’io raharaha io.
Baolina kitra CAN 2019 :: Nahazo vola 700 tapitrisa ariary avy amin’ny Filoham-pirenena ny Barea